umbono ngokomoya Appraisal (ngokomoya umbono ithamsanqa amabali) kuchanwa kwakhona nge-apreyizali e-mail?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ umbono ngokomoya Appraisal (ngokomoya umbono ithamsanqa amabali) kuchanwa kwakhona nge-apreyizali e-mail?
apreyizali Umbono ngokomoya akanasichazi kwakhona kunokwenzeka nge e-mail. Kakade ke, iya kuxhomekeka apho phezu ekukwazini izangoma, kodwa kwakhona kwindawo into ekude ezifana umbono ngokomoya, izangoma na apreyizali kunokwenzeka, ukuba kunokwenzeka laze ividiyo kwi ingqondo yabo. Ukuba izangoma ingalo ongathi nkqu kunye hits ngokwaneleyo.
Noko ke, ekubeni kakhulu kwakhona ingcaciso kwi-thethwano xa kuthelekiswa kunye ubuso ngobuso-apreyizali,-apreyizali mail, ukuze kungabikho mathandabuzo ukuba technology phambili ngakumbi, inani xa kuziwa ukuxhasa izangoma kunokwenzeka iza kuphela yinyani.
Ngendlela, kwimeko uluvo ingcali ye-imeyile, ngenxa yokuba kukho inkcazelo omncinane thethwano, nawe nazo wabuza igama kunye nomhla wokuzalwa.
kakuhle, ngenxa yaloo mbono zokomoya isenzo ezibonisa umfanekiso ingqondo, abo beza ukuva igama kunye nomhla wokuzalwa, kodwa abanye abantu ukuba wobuqhophololo, i-apreyizali ngcono, libukhali umfanekiso izangoma abeza ukuva umhla wokuzalwa akuqhelekanga ukuze project.
umbono ngokomoya kukho angalinganiyo ngenkangeleko ngokuxhomekeke ehambelanayo kunye ngamaza thethwano kunye noosiyazi, ngokuba akukho ngokucacileyo imeko engabonakaliyo, ukuhlanganiswa manani ithamsanqa-ngokuxelwa igama kunye nomhla wokuzalwa ixesha , ingxelo iza ootitshala ukuba sisondele kwiikona ezahlukeneyo.
yeposi yi yokomoya yovavanyo umbono merit
? kodwa ekhaya nto ukuthetha yendalo lula kuba yi
mail ukuba ingaba i-imeyili lula lwabo, kwimeko apho ubuso-to-ubuso yovavanyo lwentsebenzo kunye ifowuni lwentsebenzo, kwimeko umfundisi ethandwayo, kwangaphambili okanye ngaphezulu ixesha lokulinda kokuba evame ibuye isonjululwe akunjalo Akundibekelanga, kodwa unako kudityanwe ngalo naliphi na ixesha ukuba ie-mail, uyakwazi ukucela ukuba uzive ukhululekile apreyizali umbono ngokomoya. Kwimeko-apreyizali umbono yokomoya
? luzole angabekwa kunye ngamazwi akho
yomnxeba kunye ubuso ngobuso, kodwa kufuneka uxelele izangoma emazwini ezikuxhalabisayo zabo, ngobuchule awudlulisele into abantu abaninzi abakwazi. Ngelo xesha, ukuba abuze umbono oomoya, abantu ezingxoxo kaThixo Irasshaimasu abaninzi eqhelekileyo ngengqondo kunye nengqondo kwimeko buhlungu kakhulu. Ukuze bakwazi ukudlulisela iinkxalabo kakuhle kakhulu, izangoma nayo ayikwazi ukuba impendulo efanelekileyo. Yaye ngokuyimfuneko oosiyazi ifike ngokuyimfuneko Kumito 'iinkxwaleko zakho.
elo xesha, ukuba uvavanyo umbono ngokomoya nge e-mail, ukuze ngokucothayo ngapha kwexesha lobubi babo wabeka kunye, ungafumana ingcebiso ngakumbi ngqo.
ekucetyiswa Vernis of ngomnxeba ithamsanqa-nokuxela ukuba lwentsebenzo umbono ngokomoya nge e-mail
oosiyazi ukuze-apreyizali umbono ngokomoya nge e-mail kuya kunyiniwe, kodwa Vernis abantu abangaphezu kwama-330 abhalise abaxeli-mathamsanqa, ukuze ube abaninzi izangoma, abanye ingxelo iza uvavanyo umbono ngokomoya utitshala kunokwenzeka nge e-mail.
Ukongeza, ababhalise kwizifundo ezi abaxeli-mathamsanqa kunye nootitshala oosiyazi e Vernis, iya kuba kuphela umntu ophumelele nokuhlola, leyo kuthiwa ngezantsi nereyithi yokupasa ye-3% of Vernis, umgangatho othile ndithi ukhuselekile xiang.
Ukuba ngaba ungathanda uvavanyo umbono ngokomoya nge e-mail, u nga jonga kwi website esemthethweni Vernis.
izangoma ukuze-apreyizali umbono ngokomoya nge e-mail kodwa kunyiniwe, iye abhalise 330 okanye ngaphezulu abaxeli-mathamsanqa kwi Vernis, ngoko kufuneka abaninzi izangoma, omoya kwezinye e-mail apreyizali kunokwenzeka utitshala esizibonayo Welcome.